Madaxweyne Obama oo xilka loo dhaarinayo - BBC Somali - Warar
Madaxweyne Obama oo xilka loo dhaarinayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 20 Janaayo, 2013, 15:47 GMT 18:47 SGA
Madaxweynaha Maraykanka Barak Obama.
Madaxweyne Obama ayaa maanta loo dhaarinayaa markii labaad madaxweynenimada afarta sano ee soo socota.
Waxaa lagu dhaarin doonaa madaxweynaha xaflad yar oo lagu qabanayo Aqalka Cad.
Dastuurka Maraykanka ayaa dhigaya in madaxweynaha uu xilka la wareego labaatanka Janaayo, laakiin maanta ayaa ah maalin Axad oo aan la shaqayn, sidaas darteed dhaarta ay dadka ka soo qaybgalayaan bari ayaa la qabanayaa.
Sida caadada ay tahay waxaa la dhaariyay madaxweyne ku xigeenka Joe Biden marka hore, isagoo lagu hordhaariyay garsooraha maxkamada sare Sonia Sotomayor horteeda.
Madaxweyne Obama iyo ku xigeenkiisa Mr Biden ayaa mar labaad lagu hordhaari doonaa bari boqolaal kun oo qof horteeda
Amerika Ciidanka Maraykanka oo la dhimaya